Indlela yokwenza iimveliso zakho ze-Amazon zithengwe kakuhle?
Ukuba uyazibuza ukuba uthengise ntoni kwi-Amazon ngo-2018, eli nqaku liya kuba lunomdla kuwe. Apha siza kuxubusha iimfihlelo zempumelelo kwi-Amazon kunye nezinto eziza kukuzisa inzuzo. Ngaphezu koko, siya kuhamba ngeengxaki ezisisiseko ngokuthengisa e-Amazon ukukunceda ukuphepha iimpazamo eziqhelekileyo.
Indlela yokuphanda iimveliso ezithembisayo ukuthengisa kwi-Amazon?
Kwinqanaba eliphambili lokuphuhlisa ishishini lakho le-Amazon, kufuneka ufumane iimveliso ezinokuthi zizuze kwaye zithengwe kakuhle. Yinyathelo elinoxanduva kakhulu elifuna ixesha kunye nemizamo. Ngethamsanqa, i-Amazon ikunika ezininzi iinkcukacha ozifunayo ukuze uqalise.
Into yokuqala okufuneka uyenze kukuba ukhangele oko kwenza loo nto okanye loo nto inenzuzo kuwe njengomthengisi. Kufuneka uhambe kwiinkalo ezinjengeendleko zokuthutha, ukukhuphisana kweemveliso zentengiso, uhlobo lokuthandwa nokuziphatha kwabaxhasi kwimveliso yale klasi. Okukhethiweyo kufuneka kudibaniswe nezona zilandelayo migaqo.
Ezi zinto zilandelayo zilungele ukulungiswa kwempahla:
iindleko ziya kufikelela kwi-35% yentengo yakho yentengiso ekujoliswe kuyo;
ithagethi lentengo yokuthengisa phakathi kwe-$ 10- $ 50;
kungabikho ukuthumela ingxaki ngenxa yobunzima bezinto (2-3 lbs. max);
kukhethwa ukuba izinto zakho ziya kutshabalala kwaye kulula ukuzithumela;
ugweme iimveliso ezithile zonyaka okanye zeeholide njengoko abayi kuzisa inzuzo kulo nyaka wonke;
iimveliso zakho kufuneka zihluke ngohlobo oluphezulu kunye nobungcali.
Ukongeza kuzo zonke ezichazwe ngentla apha, kufuneka ukhangele ukuba into ethile ifunwa kakhulu, okanye ayifumaneki phakathi kwama-Amazon abathengi. Nangona kunjalo, kufuneka uqiniseke ukuba umkhiqizo awunakho ukhuphiswano oluninzi njengoko kuya kunciphisa amathuba akho ekuphumeni kwesihlwele.
Ezinye izinto ezibalulekileyo zibonisa ixabiso lemveliso kwi-Amazon:
iimveliso ezikhethiweyo akufanele zikhutshwe ngabathengisi be-Amazon okanye ezinkulu.
iimveliso ezifanayo zinomgangatho we-Amazon othengisa ngokugqithisileyo we-5000 okanye ophantsi kwicandelo eliphambili;
uludwe lwemveliso olufanayo aluqhelekanga phakathi kwabasebenzisi;
ukungabikho kokuhlaziywa kwemveliso;
amagama angundoqo akwizinto ezijoliswe kumkhiqizo anesisindo esingaphezu kwe-100,000 rhoqo ngenyanga.
Kwinqanaba lesibini lophando lweemarike, kufuneka uhlolisise ulwazi kumaphepha emveliso echaphazelekayo. Uludwe lweMveliso lunokukuxelela okuninzi ngomgangatho wemveliso kunye neenzuzo. Xa iphepha lemihla le-Amazon livuliwe, qwa lasela intlawulo, iindleko zokuthumela, umlinganiselo wemveliso, ubunzima bokuthumela, kunye ne-Amazon. Ingqwalasela ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe kumanqaku athengiweyo kumakhasimende kunye neenkwenkwezi. Inombolo kunye nemigangatho yokuphononongwa kwemveliso ibonisa impendulo yomsebenzisi kwinto ethile kunye nokuthandwa kwayo.
njani i-Amazon Best Best Sellers inokukunceda ukuba wenze ukhetho olumkileyo?
I-Amazon Best Best Seller rankings list of TOP 100 ukuthengisa izinto kuzo zonke iindidi. Uluhlu lwesimo luyahlukahluka imihla ngemihla. Ukuba usenkonzweni yokukhetha izinto ezixabisekileyo ukuthengisa kwi-Amazon, eli candelo liya kuba lunomdla ukuba ukhangele. Ukusuka kweli phepha, unokubhena phantsi kwi-TOP 100 abathengisa ngokufanelekileyo kwezinye iindidi kunye namacandelwana. Olu datha lunokubaluleka kwimveliso yophando lwenkqubo.
Ukukhangela uluhlu lwe-Amazon Best Seller, kufuneka wenze ukugxininisa kwezi nkalo zilandelayo:
Ukukhishwa okusha okutsha
Eli candelo libonisa iimveliso ezihamba phambili ezathandwa kwaye zithengiwe ngexesha lokugqibela. Olu datha lusekelwe kwi-Amazon product listing listers and analytics. Apha ungabetha phantsi ukubona i-Hot New Ukukhishwa kwiindidi ezithile kunye namacandelwana. Qaphela ukuba le datha ingatshintshwa ngokuhamba kwesikhathi.
I-Movers kunye ne-shakers
Eli candelo libonisa izinto ezihamba ngokukhawuleza kwi-Best Seller Rank kuzo zonke iindidi. Njengomthetho, kubandakanya ukutshisa okutshisa kunye nokuthengisa kwexesha. Ezi mveliso zifanelekile ingqwalaselo ethile njengoko zithandwa kwaye zithembisekile, kodwa zingenakukhuphisana kakhulu. Ngaphezu koko, eli candelo lingaba luncedo ekufumaneni izinto ezishushu.
Lapha uza kukhangela iimveliso ezinqwenelekayo kwi-Amazon. Ngamanye amazwi, abathengi bama-Amazon bawasindisa ezi zinto kwiintlobo zabo zoluhlu. Ayibonakali ukuthenga kodwa iyakubonisa ukukhethwa kwamakhasimende.
Nantsi uza kubona iimveliso eziza kuthenga ama-Amazon njengezipho. Yisalathisi esihle kubathengisi abafanelekileyo kwiintlobo zamaqela amaninzi kumaxesha amaninzi, kunye neeholide ezinxulumene neeholide.
Abathengisi banokufumana imali kuphela kwiiveki eziliqela
Ukuba uthengisa iimveliso zakho kwi-Amazon, kufuneka ulandele i-Amazon Seller okanye iimfuno zeCentral. Ngokutsho kwabo, inkokhelo ingenziwa ngediphozithi ngqo kwi-akhawunti yakho yokujonga nganye iintsuku ezili-14. Ayikho enye inkqubo yokuhlawula oyisebenzisayo kwi-Amazon. Kufuneka uqwalasele lo mbandela xa uceba isicwangciso sakho seshishini. Ngokomzekelo, ukuba usebenzisa ingeniso evela kwiintengiso zakho ukuthenga iimveliso ezintsha ukuthengisa, kungasikhubekiso kwishishini lakho.
Kule mihla, akulula ukuba ngumthengisi we-Amazon njengoko. Kukho abaninzi abathengisi abaphula i-Amazon imithetho kwaye bangenise inzuzo kwisiqonga. Yingakho i-Amazon yaba nzima ngokuvumela abahwebi ukuba bathengise izinto zabo kwiqonga. Abadayisi abafuna ukuthengisa iimpahla, izicathulo, izinto zezimoto kunye nezinye iintlobo zezinto ezixabisekileyo, kufuneka bafumane imvume evela kwi-Amazon.
Uya kuhlangabezana nobunzima ekwakheni iphrofayili yempendulo
Kufuneka ube neembali ezithengisayo kunye neentengiso zokufumana izibonelelo zokuncedisa okwaneleyo kwi-Amazon SERP. Ukongezelela, akuvumelekile ukuvuselela abasebenzisi ukushiya impendulo kwimveliso yakho. Ukuba ama-Amazon ayaqaphela ukuba ukuphazamiseka kwakho akuyiyo yendalo, bonke baya kususwa kwaye uya kulahlekelwa kwinqanaba lakho Source .